UN-AU oo ku baaqday in ay "abaabuliso" heshiis nabadeed oo dhexmara Bartamaha Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA UN-AU-da oo ku dhawaaqday inay "abaabulayso" hareeraha heshiis nabadeed oo dhexmara Bartamaha Afrika
UN-AU-da oo ku dhawaaqday inay "abaabulayso" hareeraha heshiis nabadeed oo dhexmara Bartamaha Afrika
Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa ugu baaqay bilowga booqashada wadajirka ah ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, in ay "abaabulaan dhammaanba si dhakhso ah u sii wadaan hirgelinta heshiis nabadeed" oo la saxiixay horraantii Febraayo.
"Ereyga muhiimka ah waa abaabulinta dhamaanba si dhaqso ah loogu soo gudbiyo hirgelinta heshiiska," ayuu yiri Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Hawlaha Nabadda ee Jean-Pierre Lacroix, isagoo Axaddii ku sugnaa Bangui , sida laga soo xigtay fiidiyoo la daabacay Isniintii oo ku saabsan shabakadaha bulshada ee Dawladda Dhexe ee Afrika.
"Waxaa jira daaqad fursad ah oo aan loo oggoleyn in la xiro maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaan dib loo furin mar dhow," ayuu raaciyay.
Ku xigeenka Guddoomiyaha Nabadgelyada iyo Amniga Midowga Afrika, Smaïl Chergui, Mr. Lacroix wuxuu booqasho ku joogaa afar maalmood oo ka tirsan Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Labada nin ayaa isku dhiibay Isniintii magaalada Bambari, oo ah magaalo ku taal bartamaha dalka, taas oo ahayd goob dagaal oo badanaa tan iyo bilawgii sanadka.
Kulanka Ururka Caalamiga ah ee Taageerada ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa la qorsheeyay in lagu qabto Arbacada Bangui, kaas oo sidoo kale ka qaybgali doona Agaasimaha Midowga Afrika ee Midowga Yurub, Koen Vervaeke.
Heshiis nabadeed Khartoum ayaa la saxiixay horraantii bishii Febraayo ee Bangui intii u dhexeysay afar iyo toban kooxood oo hubeysan iyo mas'uuliyiin. Diyaargarow tan iyo 2017 by AU, waa sideed saxiixan tan iyo bilowgii dhibaatada 2013.
Xukuumad cusub ayaa loo magacaabay natiijada heshiiskan, kadibna dib-u-habeeynta kadib markii kooxo hubaysan ay isku khilaafsan yihiin.
Haddii kooxdii ugu danbeysay ee dowladda taariikhaysan weli inta badan ka faa'iiday aaminka ah ee Madaxweynaha Faustin-Archange Touadéra, wakiilo badan oo ka mid ah kooxaha hubeysan, kuwaas oo qaar ka mid ah madaxda xusay in NGO ayaa sheegay in xilalka xadgudubyada, waxaa loo doortay.
Inkastoo ay jiraan, isku dhacyo dhowr ah ayaa ka dhacay dalka tan iyo markii la saxiixay heshiiska. Horaantii Abriil, Qaramada Midoobay waxay bilowday hawlgal milateri oo weyn oo looga soo horjeedo koox hubaysan oo ku taal galbeedka dalka.
Khayraadka dabiiciga ah, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa burburisay dagaal, taas oo ku dhawaad ​​rubuc ka mida qiyaasta 4,5 million dadka ah inay ka cararaan guryahooda.
Halkan waxaa laga soo xigtey: https://www.voaafrique.com/a/une-mission-onu-ua-to-mobilize-about-the-aureement-of-centralafrica/4875994.html
Suudaan: ugu dambeyntii Midowga Afrika
Dadka: Ka dib geeridii George HW, Barbara Bush ayaa dib udhigtay munaasabad cajiib ah
"Dabool ama hoos u dhig": haweeney da 'yar ayaa ku foororsatay diyaarad sababtoo ah waxay gaabisaa gaabis aad u sareysa
Oh, mudnaanta uu leeyahay! Hooyo-ka-cabsi ayaa ka cabsaneysa inay ku dhalato isbitaalka dhalmada sida Meghan Markle
Switzerland: Switzerland ayaa ku qulquleysa Ruushka
Ra'iisul Wasaaraha Malia Soumeylou Boubèye Maïga ayaa is casilay
DADKA & LIFESTYLE3,085